အမေဖြစ်သူကို ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေဆုတံဆိပ်တွေနဲ့ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို – Suehninsi
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ချိန်ကတည်းက ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေများစွာရရှိထားတာပါ။ ပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိပြီးနောက် သီချင်းတွေဖန်တီးသီဆိုရင်း အနုပညာအလုပ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်လာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု
အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ Solo အယ်လ်ဘမ်ထွက်ရှိထားသလို Ah Boy နဲ့အတူသီဆိုထားပြီး မကြာသေးခင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ “အငွေ့အသက်များ” သီချင်းကလည်း အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့
ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး JOOX ကပေးတဲ့ဆုတွေကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ။ ဆုတံဆိပ်တွေကိုတော့ မိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်ပြီးတော့ ကန်တော့နိုင်တာကို ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ “မိုင်းစတုန်းတွေပေးတဲ့ဆုနဲ့
မေကြီးကို ကန်တော့နိုင်ပြီ ..Thank you so much! JOOX Myanmar” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားကာ ပရိသတ်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ သမီးအလိမ္မာလေးကြောင့် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့မေမေကတော့ ကြည်နူးနေမှာအသေအချာပါပဲ။
မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲမှာပါဝငျယှဉျပွိုငျခြိနျကတညျးက ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှမြေားစှာရရှိထားတာပါ။ ပွိုငျပှဲမှာဆုရရှိပွီးနောကျ သီခငျြးတှဖေနျတီးသီဆိုရငျး အနုပညာအလုပျတှတေောကျလြှောကျလုပျလာဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှု
အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတျောတဈဦးဖွဈနပေါပွီ။ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကတော့ Solo အယျလျဘမျထှကျရှိထားသလို Ah Boy နဲ့အတူသီဆိုထားပွီး မကွာသေးခငျကထှကျရှိထားတဲ့ “အငှအေ့သကျမြား” သီခငျြးကလညျး အတျောလေးရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ။ သူကတော့
ဂီတနဲ့ပတျသကျပွီး JOOX ကပေးတဲ့ဆုတှကေိုလညျး ရရှိပိုငျဆိုငျထားပါပွီ။ ဆုတံဆိပျတှကေိုတော့ မိခငျဖွဈသူကိုပွနျပွီးတော့ ကနျတော့နိုငျတာကို ဝမျးသာပြျောရှငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအကွောငျးကိုတော့ “မိုငျးစတုနျးတှပေေးတဲ့ဆုနဲ့
မကွေီးကို ကနျတော့နိုငျပွီ ..Thank you so much! JOOX Myanmar” ဆိုပွီးတော့ ရေးသားကာ ပရိသတျတှကေို မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ သမီးအလိမ်မာလေးကွောငျ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့မမေကေတော့ ကွညျနူးနမှောအသအေခြာပါပဲ။
Source : Chan Myae Mg Cho’s Facebook